Zvigadzirwa Vagadziri & Vatengesi - Ziling Packaging
Foam liner ndeye yakajairwa chinangwa liner, yakagadzirwa neinomanikidzika polyethylene furo. Izvi hazvigadzi chisimbiso, uye zvinowanzo shandiswa kudzivirira kudonha.
Fomu Liner imwe-chidimbu liner, izvo zvinhu iEVA, EPE etc.
Pamusoro payo pachayo elastic tuma contractility uye mudziyo chiteshi.
Inokodzera marudzi ese echisimbiso chemidziyo, inogona kushandisa kakawanda, asi chisimbiso mhedzisiro.
Inogona kushandiswa mushure mealuminium-epurasitiki rinoumbwa membrane rinoumbwa uye iko kuiswa kwekuisa chisimbiso kuri nani.
Iwo makuru maficha eiyo yakachena, guruva, usatore mweya wemvura, kwete nekuda kwehunyoro kana tembiricha kuti ishandure kugadzikana kwayo.
Iyo glue seal inogona kugadzirwa kuita chidimbu chimwe chete kana zvidimbu zviviri zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Iko kune dura rinopisa rinonyungudika rinonamatira pane yekuisa chisimbiso chealuminium chisimbiso liner. Mushure mekudziya neyakagadziriswa induction muchina kana simbi yemagetsi, iyo yekunamatira dura ichavharwa pamuromo wechigaba. Mhando iyi liner inowanikwa kune ese marudzi emidziyo yezvinhu., Kunyanya kune girazi mudziyo, asi mhedzisiro yacho haisi nani pane iyo induction chisimbiso liner.